Game Booster wuxuu baalal siinayaa ciyaarta Galaxy-kaaga: waxaad u baahan tahay inaad ogaato | Androidsis
Manuel Ramirez | | Ciyaaraha Android, Samsung, Khiyaamada Android
Game Booster waa aalad weyn oo loogu talagalay ku ciyaarista mobilada Samsung Galaxy waxaana muuqaalkan aan ku soo bandhigeynaa dhamaan faa'iidooyinka iyo qalabka aad gacanta ku heysato.
Waa kan Samsung Galaxy Note 10 + oo aan u adeegsan doonno inaan ku soo bandhigno shaqooyinkaas horumarsan, Tilmaamidda xannibaadda, guddiga gelitaanka degdegga ah iyo astaamo kale oo taxane ah oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysato cayaarahaaga adiga oo aan lagaa qasin, ama si fudud adiga oo kor u qaadaya shaqooyinka ugu muhiimsan ee taleefanka, sida barnaamijyada shaashadda buuxa ama Dolby Atmos .
1 Ciyaarta xoojinta ciyaarta
2 Qufulka gacanta
3 Fursadaha Xannibaadda badan
4 Astaamaha ciyaarta ee horumarsan
5 Gudiga Abka
6 Dejinta Ciyaaraha Kordhinta
7 Hawlaha La Xiriira
Ciyaarta xoojinta ciyaarta
Game Booster wuxuu leeyahay guddi macluumaad taas oo na tusaysa xaddiga batteriga ee kordhay markii la isticmaalayo qalabkan, iyo sidoo kale laba icons oo ay ku tusinayso sida ay ula socoto heerkulka iyo xusuusta. Midka ku xiga waxaan haysannaa waqtiga ciyaarta hadhay iyadoo loo eegayo xaddiga batteriga aan haysanno. Inkasta oo tiradan ay aad isugu dhowdahay.
Laga soo bilaabo Game Booster panel waxaan ka heli karnaa Quful inta lagu jiro ciyaarta, astaamaha ciyaarta ee horumarsan, dhaqaajiso qufulka taabashada shaashada, qabashada shaashadda ama marin u hel Discord haddii aan ku rakibnay mobilka; waa madal farriin loogu talagalay ciyaaraha moobiilka.
Dhinaca kale ee guddiga, waxaan leenahay helitaan deg deg ah 4 barnaamij in aan wax ka beddeli karno iyo dejimaha ku yaal xargaha. Sidaa darteed, marka la eego guud ahaan, waxay tahay Game Booster shaashadeeda ugu horreysa.
Maalmo yar gudahood taas oo aan inta badan u isticmaalno ishaarooyin si aan ugu wareejino desktop-ka, barnaamijyada iyo ciyaaraha, Booster Game waxay naga caawineysaa inaan iska ilaalino tilmaamahaas keeni kara in, ciyaaraha sida PUBG Mobile (dhawaan lagu cusbooneysiiyay cusbooneysiin weyn), Farriinta farxadda leh ayaa u muuqata in haddii aan dooneyno inaan ciyaarta ka tagno. Cinwaan sida dagaal royale, waxay macnaheedu noqon karaa farqiga u dhexeeya nolosha iyo dhimashada.
Markaan kaheleyno Game Booster-ka goobaha horumarsan, markaad isticmaaleyso mid ka mid ah astaamaha, sida guriga, laba icons ayaa muuqda, mid na siinaya helitaanka Game Booster iyo mid kale oo loogu talagalay qufulka shaashadda (laakiin taas waan awoodi karnaa sidoo kale). Guji midka kore iyo Game Booster oo leh howlaha oo dhan ayaa furi doona.
Waxaan aadeynaa "Qufulka inta ciyaarta socoto" oo aan dhaqaajineyno tilmaamaha shaashadda. Sidan oo kale, markasta oo aan gadaal u dhaqaaqno, waa inaan laba jeer ku celcelinaa si aan u qabanno ficilka. Taasi waa in la yiraahdo, sidan waxaan uga fogaaneynaa in ciyaaraha sida PUBG Mobile aan fariinta ku helno in haddii aan dooneyno inaan ka tagno ciyaarta.
Fursadaha Xannibaadda badan
Laga soo bilaabo «Block inta lagu guda jiro ciyaarta» waxaan u hawlgelin karnaa ogeysiisyada iyo wicitaanada, xulashooyinka si loo yareeyo ogeysiinta wicitaanka oo aadan tusin ogeysiisyo. Qaabkan gabi ahaanba ciyaarta ayaa nalagu soo jiidan doonaa, anaga oo iska dhaafeyna ogeysiisyada ilaa aan ka xirayno.
Waxaan sidoo kale dhaqaajin karnaa dhalaalka otomaatiga ah, in kastoo kuma talinayno si ay had iyo jeer u noqoto qaddar sax ah. Fursadaha kale waa Bixby iyo Edge Content. Ka shaqeynta labadan waxay ka hortageysaa kaaliyaha Samsung iyo waxyaabaha Edge ee dhinaca ka socda inay baxaan.
Astaamaha ciyaarta ee horumarsan
Halkan waxaan ku iftiiminaynaa suurtagalnimada si dhakhso leh u gal shaashadda shaashadda shaashadda buuxda, haddii aan ku jirno ciyaarta markii ugu horeysay. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa isticmaalka qufulka shaashadda otomaatigga ah, si daqiiqado gudahood, taxane muuqaallo muuqaal ah loo hawlgeliyo si loo yareeyo isticmaalka tamarta. Waa ikhtiyaarka xiga ee ah inaynu dhaqaajinno si loo hagaajiyo keydinta bateriga markaan ku jirno qufulka.
Iyo, halkan, waan awoodnaa dhaqaajiso qaybta barnaamijyada taasi waxay muhiim noogu noqon kartaa kulamadaas PUBG Mobile. Waxaan u leenahay maxaa yeelay haddii ay ku dilaan oo aad rabto inaad ka sii mid ahaato kooxda oo ay waqti ku qaadan karto, waad bilaabi kartaa barnaamijyada aad rabto sida WhatsApp, biraawsarka ama wixii kale.
Waxaan siineynaa shaqadan qayb gaar ah. Haddii aan u tagno guddiga aan furan nahay, si hufan ku saabsan badhanka saddexda dhibic ee taagan, waxaan heli doonnaa dejimaha na geyn doona shaashadda qaabeynta. Waan tirtiri karnaa toobiyeyaasha aan hayno oo waxaan ku dari karnaa illaa afar barnaamij.
Kiiskeena waxaan u xilsaarnaa kuwa aan isticmaali karno inta aan ciyaareyno oo aan u baahan karno. Guddi markii barnaamijku firfircoon yahay. Waxaan wax ka beddeli karnaa cabirkiisa si loogu isticmaalo si ka wanaagsan. Waxaad dhahdaa markaan haysanno barnaamij firfircoon, Game Booster wuxuu qaadan doonaa shaashad si uu ugu dhaafo asalka si loo badbaadiyo batteriga; Waad qiyaasi kartaa haddii barnaamijku uu socon lahaa inta ciyaartu soconayso isticmaalka la samayn lahaa.
Abkaas waa la yareyn karaa si dhakhso leh loo furo sida ay noqon laheyd WhatsApp oo sidaas ku sii wad inaad u dirto sheeko saaxiib ama saaxiib.
Dejinta Ciyaaraha Kordhinta
Dejinta Game buusterka waxay noo oggolaaneysaa inaan marinno marinnada. Halkii aad ka heli lahayd qufulka taabashada shaashadda, waan awoodnaa u qoondee shaashadda, guddi gujisid ama midna.
Sidoo kale fursad noo siiso inaan ku beddelno xallinta shaashadda shaashadda iyo macluumaadka ku saabsan barnaamijka iyo nooca uu yahay.
Hawlaha La Xiriira
Haddii aad isticmaasho Game Booster waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho Launcher Game. Waa barnaamij markii la furo, ciyaar kasta oo aad rakibto ka dhex muuqan doonta. Waxay u egtahay xarun loogu talagalay macluumaadka, cusbooneysiinta iyo runtu waxay tahay inay wanaagsan tahay. Waxaad haysaa tirakoobka ciyaarta, waqtiga aad ku baabbi'ineyso mid kasta iyo khaanad dhammaan cayaaraha si aad dhammaantood hal meel ugu wada urursato; xitaa wuxuu siinayaa tirakoobka waqtiga guud kulamada ay ciyaareen kumanaan kun ciyaartooyda iska leh Galaxy.
Waana sidaas Ciyaaraha Kordhinta, oo ah aalad habeynta ciyaarta taasina waxay na siineysaa qalab taxane ah si aan kor ugu qaadno ciyaaraha ka socda Samsung Galaxy; sida aad awoodid oo kale ku rakib dhammaan nidaamyadan Xusuusin 10+ ama wixii Galaxy ah. Haddii aadan isku dayin, wax yar sii, waxaan kuu xaqiijineynaa inaadan noolaan karin la'aanteed waqtigaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » [Fiidiyow] Wax kasta oo aad ku sameyn karto Qalabka Ciyaaraha ee Samsung Galaxy-kaaga
Dhamaadka maqaalka waxaad tiraahdaa waan ku raaxeysan karnaa astaamahan cusub ee galaxiisteena, fasalkan waxaa lagu tijaabiyay note10 +, laakiin laguma raaxeysan karo galaxi dhan, sidaad u leedahay, waxaan horey u haystay note4, N910F, iyo Kuma raaxeysan karo, qallafsanaanta marka aan warbixin sameynayo oo aan dhaho moodooyinka k d samsung ayaa noqon kara kuwo la ixtiraamo dookhaan, YAA KAMA DHAMMAAN KELIYA AAN NAHAY GALAXY.
Ku jawaab jose ignacio
Hagaag, waxay ku siin kartaa ku dhowaad sabab kasta. Maxaa dhacaya ayaa ah in Samsung ay fureyso wadada qalabkeeda badan. Waxay ku dhacday Samsung Dex inay gaar u ahayd dhawr bilood. Hadda waxay leeyihiin terminaal dheeri ah. Oo sidaas ayay ku dhacdaa Game Booster, in raadinta liistada mobilada iswaafajiya, ma heli karno.
Waad salaaman tahay, hadii wax waliba fiican yihiin, laakiin ma aadan dhigin xiriiriye si aad u soo dejiso Ciyaaraha Sare, saaxiib.
Waxaan horeyba u isticmaalay 10 ka mid ah ciyaartooyda ciyaarta ee ku jira playstore iyo dukaamada galaxy waana gabi ahaanba fashil, waxaan haystaa S10 caadi ah. Waxaan sugayaa jawaabtaada iyo iskuxirka. Salaan.
MediaTek waxay horey u kobcisay processor-keedii ugu horreeyay oo leh 5G